Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Koorsooyinka golf -ka/huteelada ugu caansan Mareykanka
Mareykanka had iyo jeer wuxuu jecel yahay golf. In kasta oo ciyaartu ay asal ahaan ka soo jeedo Ingiriiska, haddana Mareykanku wuxuu leeyahay 45% tas -hiilaadka golf -ka adduunka wuxuuna martigeliyaa horyaallada waaweyn.
Yaabid 36.9 million Dadka Mareykanka ayaa ciyaaray golf sanadkii 2020 oo kaliya.
La yaab malahan in dalkani hoy u yahay halyeeyada golf -ka.
Iyada oo ku saleysan cilmi -baaris ay samaysay mareegaha isbarbardhigga duulimaadka Hel Duulimaad Jaban, waxaan diyaarinay liiska koorsooyinka golf -ka ugu caansan iyo meelaha lagu nasto ee Mareykanka.
Tilmaan -bixiyahan wuxuu ku siin doonaa aragti ku saabsan qaar ka mid ah naadiyada golf -ka ugu gaarka ah adduunka. Laga soo bilaabo galbiyeyaasha limousine illaa $ 250,000 oo ah khidmadaha xubinnimada, waxaa jira wax badan oo naadiyadan ka badan ciyaarta golf -ka.
Koorsooyinka golf -ka ugu caansan iyo meelaha lagu nasto ee Mareykanka
Qaar badan oo ka mid ah koorsooyinka golf -ka ugu caansan iyo meelaha lagu nasto ee Mareykanka ayaa la sameeyay 50 sano ka hor. Siyaasiyiinta caanka ah ee Hollywood -ka iyo siyaasiyiinta xoogga leh ayaa garbaha ka xoqday koorsooyinka iyo dibaddaba, in kasta oo yaqaana waxa ay ka hadlaan inta ciyaarta lagu jiro!
Qaar ka mid ah koorsooyinka golf -ka ee ugu caansan Mareykanka waxaa ka mid ah Riviera Country Club ee California, Shadow Creek ee Nevada iyo Pine Valley Golf Club ee New Jersey.
Sii wad akhrinta si aad u ogaato koorsooyinka golf -ka iyo meelaha lagu nasto ee sameeyay liiska 'ugu caansan' Mareykanka.
Fuuq -Fidinta waa mid ka mid ah laba koorso oo la xiriira Naadiga Mareykanka. Waxay ku socotaa laba mayl oo xeebta harada Michigan ah oo ah qaabka isku xirnaanta 36-dalool. Koorsada lafteedu waa 6,757m waxaana naqshadeeyay labada isqaba, Pete iyo Alice Dye.
Koorsadani waa mid si fiican loo ciyaaro. Waxaa lagu wadaa inay martigeliso koobkii 43 -aad ee Ryder sanadka 2021 oo ay ku tijaabiso kooxda heysata xadka. Waxay hore u martigelisay dhowr PGA Championships iyo US Open Open.
Waxaad naftaada u daaweyn kartaa xirmo golf si aad si buuxda ugu hesho koorsada. Xirmo caan ah ayaa ah To Dye For, oo ay kujirto joogitaan saddex-habeen ah, afar ciyaarood oo 18-god ah iyo cashar golf 30-daqiiqo ah.
In kasta oo uu ku saleysan yahay Wisconsin, koorsadu waxay xusuusinaysaa goob beer -Irish oo rustic ah. Waxaa jira makhaayado dhowr ah oo aad ku cuni karto ka dib maalinta mashquulka badan ee golf -ka. Cuntooyinka ay saamaysay Ingiriisku waxay ka kooban yihiin suxuun saxeex ah sida dhagaxa dhagaxa dhegdhega ah iyo rakcad wan.
Augusta Golf Kulanka Qaranka
Iyada oo ku saleysan Augusta, Georgia, naadigan waxaa la furay 1930 -yadii. Kani waa mid ka mid ah naadiyada ugu khaaska ah gudaha Mareykanka maadaama ay u furan tahay oo keliya xubnaha iyo martida-martida kaliya.
Dadka badankiisu waxay yaqaanaan naadiga Augusta ka dib markay ka daawadaan shaashadaha telefishankooda Abriil kasta. Tartanka Master -ka waxaa lagu marti qaaday koorsada tan iyo markii uu sameeyay Bobby Jones 1934.
Koorsadu waa 18-dalool, oo u dhiganta 72. Waxaa soo hindisay horyaalkii hiwaayadda, Bobby Jones iyo naqshadeeye, Alister Mackenzie. Labadan qof ayaa cadeeyay inay yihiin lammaane awood badan oo natiijaduna ay tusaale fiican u tahay fidinta nadiifta iyo furan ee koorsada golf -ka Mareykanka.
Wadarta dhererka koorsadu waa 7,475 yaard. Mid kasta oo ka mid ah godadka waxaa loogu magac -daray dhirta maxaa yeelay goobtu waxay hore u ahayd xannaanada dhirta. Daloolka 1aad waxaa la yiraahdaa Shaah Olive, oo leh magacyo kale oo ay ku jiraan Ubax Crab Apple (4aad) iyo Carolina Cherry (9aad).
Xeebta Golf ee Kiawah Island
Kiawah Island Golf Resort waxaa lagu qiimeeyay darajooyinka ugu sarreeya 100 ee Adduunka (Koorsada Badweynta) sannadka 2020. Waxay kaloo martigelisay Tartanka PGA sannadka 2021, kaasoo ah midka kaliya ee ka mid ah afarta horyaal ee waaweyn oo si gaar ah loogu hayo goleyaasha xirfadleyda ah.
Waxaa jira shan koorso oo ku yaal Jasiiradda Kiawah: Koorsada Badweynta, Osprey Point, Oak Point, Turtle Point iyo Cougar Point. Koorso kastaa waa 18 god, 72 bar. Iyada oo toban godad ku dhow yihiin Atlantic iyo siddeed kale oo si toos ah uga soo horjeedda, Koorsada Baddu waxay leedahay godadka ugu badan ee xeebta ku yaal Waqooyiga Hemisphere. Tani waxay ka dhigaysaa koorso dabayl gaar ah leh oo ku darsata loolanka koorsada.
Goobta golf -ka ee Koonfurta Carolinian waxay ku faantaa 14 makhaayado, baararka iyo kafateeriyada, oo ay ku jiraan Qolka Badweynta iyo Jasmine Porch. Waxaad ku qaadan kartaa wakhti dhimista shanta xiddigood ee isboortiga iyo saloon oo waxaad joogi kartaa Hoteelka Sanctuary, Villa-yada loo dalxiis tago ama aqal qaas ah.
Naadiga Riviera Country
Waxay ku taallaa Pacific Palisades, California, Naadiga Riviera Country Club wuxuu furan yahay ku dhawaad ​​qarni. Koorsadu waxay si joogto ah u martigelisaa Los Angeles Open waxayna isu diyaarineysaa inay martigeliso dhacdooyinka golf -ka ee Ciyaaraha Olombikada 2028.
Si la mid ah naadiyo kale oo badan oo liiskan ku jira, Riviera Country Club waxaa loogu talagalay xubnaha oo keliya. Xubnaha hore waxaa ka mid ah Walt Disney iyo Dean Martin. La yaab malahan in dadka wax -garadka ah ay yihiin kuwa kaliya ee galaya naadigan gaarka ah - xubinnimada waxaa lagu xantaa inay ku kacdo qarash $ 250,000!
Koorsada 18-dalool waxay leedahay astaamo gaar ah sida cawska Kukuya, oo ah caws muhiim u ah Afrika. Naadiga waxaa kale oo ku jira naadiga teniska haddii aad jeceshahay inaad aado ciyaar kale. Waxaad joogi kartaa mid ka mid ah 24 qol oo marti loo magacaabay haddii aad nasiib u leedahay in xubin lagugu casuumo inaad ka ciyaarto naadiga.
Naadiga Golf ee Pine Valley
Naadiga Golf -ka Pine Valley Golf Club waxaa laga furay Koonfurta New Jersey sanadkii 1919. Waxaa tan iyo markaas loo yaqaanay mid ka mid ah koorsooyinka ugu adag adduunka, iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu gaarka ah.
Haddii aan xubin lagugu casuumin inaad soo booqato koorsada, lagama yaabo inaad xubin ka noqoto koorsadan. Waxaa lagu xantaa inay jiraan ku dhawaad ​​930 xubnood oo adduunka oo dhan ah, in kasta oo liisku yahay sir si dhow loo ilaaliyo. Si ka duwan naadiyada kale ee bixiya habka dalabka xubinnimada, guddiga agaasimayaasha ee Pine Valley Golf Club ayaa u taga xubnaha cusub ee iman kara.
2021 ayaa isbeddel weyn lagu arkay naadiga - haweenku hadda waxay ku biiri karaan xubin ahaan waxayna ku raaxaysan karaan ciyaar aan xad lahayn. Sanadihii hore, haweenka waxaa loo oggol yahay oo kaliya inay marti ahaan u ciyaaraan galab Axad ah. Sebtember waxay sidoo kale aragtaa Pine Valley oo martigelineysa Koobka Kubadda Cagta sanadlaha ah, oo loogu magac daray aasaasaha kooxda. Maalinta Koobka Kubadda Cagta waa waqtiga kaliya ee xubnaha dadweynaha loo oggolaado inay galaan naadiga.
Xagee kale ayaa qasab ah in lagu yimaado koorsada golf -ka iyada oo loo marayo limousine? Shadow Creek wuxuu jecel yahay inuu wax u sameeyo si ka duwan sidii hore oo xiisahaani waa qayb ka mid ah soo jiidashadiisa. Martidu waa inay joogaan hoteelka MGM ee Las Vegas si ay u awoodaan inay ku ciyaaraan koorsada golf ilaa 20 ilaa 30 daqiiqo u jirta.
Shadow Creek wuxuu ku bilaawday sidii koox gaar loo leeyahay 1989, laakiin wuxuu noqday mid dadweyne ku dhawaad ​​20 sano kahor. Tom Fazio wuxuu naqshadeeyay koorsada 18-dalool oo ku yaal meel u dhexeysa agagaarka lamadegaanka, oo leh buuro.
Koorsadu waxay martigelisay PGA Tour's CJ Cup 2020 waxayna sidoo kale martigelisay Match: Tiger vs. Phil (Tiger Woods vs. Phil Mickelson) sanadka 2018.
Naadiga Oakmont Country Club
Waxaad ka filan kartaa fasallo iyo aragtiyo qurux badan mid ka mid ah koorsooyinka golf ee ugu da'da weyn dalka. Naadiga Oakmont Country Club waxaa la aasaasay sanadkii 1903 waxayna ilaalisay sumcaddeeda inay tahay mid ka mid ah koorsooyinka ugu adag agagaarka.
Cagaarka dhaqsaha badan iyo 175 dabaqyo qoto dheer (oo ay ku jiraan kaniisada caanka ah ee Pews) ayaa koorsadan Pennsylvania ka dhigaysa caqabad xitaa kubbadda cagta ugu khibradda badan. Waxaad awoodi doontaa oo kaliya inaad tagto haddii adiga shaqsi ahaan lagugu casuumo inaad ka soo qeyb gasho naadiga sida martida ama aad runtii xubin ka noqoto.
Naadigu wuxuu kaloo marti geliyaa aroosyo iyo dhacdooyin shirkadeed qolalkooda hawsha badan. Ku marti -geli dhacdadaada Ballroom -ka casriga ah, ama u dooro Maktabadda dhacdo ka xasilloon oo aad isugu dhow.
Waxaa jira lix koorso oo kala duwan oo ku yaal Bandon Dunes Golf Resort. Waxaad ku raaxeysan kartaa ku ciyaarista koorsada iskuxirka adoo eegaya Badweynta Baasifigga. Ilaalinta Bandon waa koorso 13 god leh oo aad uga badan ciyaar wanaagsan. Dhammaan wixii ka soo baxa koorsada waxay aadaan Isbahaysiga Xeebaha Wabiyada Weyn, kaas oo taageera ilaalinta, bulshada iyo dhaqaalaha maxalliga ah.
Ma gaajoon doontid maaddaama ay jiraan toddoba makhaayadood iyo baararka laga doorto. Iskuday cunnada maxalliga ah ee Waqooyi-Galbeed ee Baasifigga ee Grill-ka Baasifigga, ama cuntada dhaqanka Scottish-ka ah ee McKee's Pub.
Ku raaxayso koorsada golf -ka raaxada qolkaaga adiga oo dooranaya qol ku yaal The Inn. Halkan, waxaad awoodi doontaa inaad ka aragto daaqaddaada aragti aan kala go 'lahayn Haddii kale, waxaad dooran kartaa inaad ku sugnaato Barkadda Lily, halkaas oo aad ku yeelan karto sagxad khaas kuu ah oo indhaha ku haya kaynta. Waxaa jira xulasho aad u badan oo leh lix meelood oo laga dooran karo.
Naadiga Golf ee Tuulada Muirfield
Tuulada Muirfield waxay lahayd sumcad weyn oo la raaco maadaama magaceedu yahay hoyga golf -ka ugu da'da weyn adduunka. Jack Nicklaus wuxuu rabay inuu maamuuso koorsada caanka ah markii uu isagu naqshadeeyay 1974.
Dublin, Ohio waa masaafo aad uga fog Scotland, laakiin koorsadu waxay ku sugnaan doontaa dhaxalkeeda. Waxay ku baahsan tahay 220 hektar, xubnaha iyo martidoodu waxay ku ciyaari karaan koorso leh khataro badan oo biyo ah, xirmooyin iyo wadiiqooyin cidhiidhi ah.
Nicklaus wuxuu si joogto ah u kormeeraa kor u qaadista koorsada si naadigu ula socdo isbeddelka teknolojiyadda iyo horumarka dhismaha. 2020 wuxuu arkay dib -u -dhis weyn oo ku saabsan koorsada oo daloollo badan ayaa la hagaajiyay.
Waxaa jira afar meelood oo laga cunteeyo naadiga, oo ay ku jirto Qolka Golden Bear-saaxiibtinimo ee qoyska, kaas oo ka kooban dab-shidan oo laba dhinac leh.
Waxaa la aasaasay 2009, Naadiga Wadanka ee Muirfield Village Foundation wuxuu kaloo caawiyaa carruurta leh baahiyaha gaarka ah ee Ohio. Tan iyo markii la aasaasay, aasaaska wuxuu ku deeqay in ka badan $ 250,000 oo deeq ah hay'adaha samafalka ee kala duwan.